Nezvedu - Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd.
Nesuwo tsika kuita EPS anoumba vamwe muchiso EPS michina kubva Germany, Korea, Japan, Jorodhani etc.
Hangzhou Dongshen Machinery Injiniya Co, Ltd
Yedu rimwe bhizinesi rakakosha ndeye EPS mbishi yekugadzira mutsara. Isu tine timu yehunyanzvi yehunyanzvi yekugadzira iyo EPS mbishi yezvinhu chirimwa, kupa yekutanga-kirasi fomula yeEPS marozari ekugadzirwa, uye kutarisa iyo EPS resin chirongwa chekuvaka pane saiti. Isu tinopa zvese zvishandiso zvekugadzira EPS mbishi zvigadzirwa, senge EPS magetsi, EPS yekuwacha matangi, EPS sieving michina etc.Tinogona tsika kugadzira iyo EPS mbishi zvinhu zvemidziyo sekuenderana nemutengi kugona chinodiwa. Isu tinopawo zvigadzirwa zvemakemikari ekugadzira mabhesi ePSS, senge HBCD, DCP, BPO, mumiriri wekumhara etc. Isu tatoita akawanda akakwana EPS mbishi zvinhu zvemapurazi epamba nekunze kwenyika.
Dzimwe nguva isu tinobatsira vatengi kuburitsa zvinhu zvavanokumbira. Nekuda kwekuvimbika kwedu uye nebasa, vatengi vazhinji vanga vachishanda nesu kweanopfuura makore gumi. Ivo vanotivimba, saka ivo vanotibata isu sehofisi yavo yekutsvaga kuChina. Isu tinovabatsira kuti vawane yakanaka yekutengesa uye voita yemhando yekutarisa kwavari kana vachinge vanzwa kunetseka kufamba. Tinogara tichitarisira kubatana kwenguva refu, uye tinokoshesa hukama neese mutengi.